Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles avy amin'ny lahatsoratra manan-tantara
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao isan-karazany » Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles avy amin'ny lahatsoratra manan-tantara
Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Seychelles (IATA: SEZ, ICAO: FSIA), na Aéroport de la Pointe Larue amin'ny teny frantsay, no seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Seychelles izay miorina amin'ny nosy Mahé akaikin'ny renivohitr'i Victoria. Ny seranam-piaramanidina no toeram-ponenana sy foiben'ny Air Seychelles ary misy làlana isam-paritra sy lavitra lavitra noho ny maha-zava-dehibe azy io ho fialan-tsasatra iraisampirenena.
Ny seranam-piaramanidina dia 11 kilometatra (6.8 mi) atsimoatsinanan'ny renivohitra ary azon'ny lalambe Victoria-Providence. Izy io dia ampahany amin'ny distrikan'ny fitantanan'i La Pointe Larue (faritry ny terminal), ny Cascade / Providence (any avaratra), ary ny Anse aux Pins (any amin'ny tobin'ny atsimo sy ny tafika).
Ny jiro tsy mitodika any Seychelles (Ident: SEY) dia miorina eo amin'ny 6.2 km (11.5 km) miala ny faran'ny lalana Runway 13. Ny Seychelles VOR-DME (Ident: SEY) dia eny an-tsaha.
Ny terminal anatiny dia lavitra avaratry ny terminal iraisam-pirenena ary manolotra sidina eo anelanelan'ny nosy miaraka amin'ny tampon'ny fiaingana isaky ny 10-15 minitra amin'ny fotoana be atao izay mifanaraka amin'ny fahatongavan'ireo / fiaingana iraisam-pirenena ary isaky ny 30 minitra amin'ny fotoana hafa. Ny tobin'ny kargo dia atsimon'ny terminal iraisam-pirenena ary mitantana ny entana amin'ny hetsika iraisam-pirenena sy anatiny rehetra; Air Seychelles no mitantana azy.
Ny toby iray an'ny Seychelles Public Defense Force (SPDF) dia eo amin'ny farany atsimo atsinanan'ny Runway 13 amin'ny nosy iray izay niaraka tamin'i Mahé tamin'ny fananganana ny seranam-piaramanidina.
Ny fanokafana ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Seychelles dia nitranga tamin'ny 20 martsa 1972 avy tamin'ny Mpanjakavavy Elizabeth II. Wilkenair avy any Kenya kosa dia efa nanomboka serivisy sambo teo anelanelan'ny Mombasa sy Mahé tamin'ny alàlan'ny Diego Suarez tany Madagascar sy ny Astove Island (Seychelles) tamin'ny fampiasana maotera kambana Piper Navajo tamin'ny taona lasa. Niasa tany Seychelles indray mandeha isan-kerinandro. Ny mpanamory fiaramanidina voalohany tonga tany amin'ny seranam-piara-manidina Seychelles dia i Tony Bentley-Buckle, izay nanidina ny fiaramanidiny manokana avy tany Mombasa nankany Mahe tamin'ny alàlan'ny Moroni tamin'ny martsa 1971 na dia talohan'ny nahavitan'ny seranam-piaramanidina aza. Ny ora nanamoriana dia 9 ora 35 minitra.
Nanaraka izany ny East Africa Airways tamin'ny Novambra 1971 sy Luxair tamin'ny Desambra tamin'io taona io ihany. BOAC Super VC10 no fiaramanidina fiaramanidina voalohany niantsona tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Seychelles tamin'ny 4 Jolay 1971. Tamin'ny fotoana nisokafany dia nanana lalambe 2987 m sy tilikambo fanaraha-maso izy. Ny fikirakirana lalina sy ny fiasan'ny seranam-piaramanidina hafa rehetra dia nataon'ny DCA (Direction of Aviation Civile).
Tamin'ny 1972 John Faulkner Taylor sy Tony Bentley-Buckle dia nanangana ny orinasam-piaramanidina voalohany teo an-toerana Air Mahé, izay niasa Piper PA-34 Seneca teo anelanelan'ny Praslin, Fregate, ary Mahé Islands. Ity fiaramanidina ity dia nosoloin'ny Nosy Britten-Norman. Tamin'ny 1974, dia zotram-piaramanidina maherin'ny 30 no nanidina nankany Seychelles. Ny fikirakirana ny tany sy ny asa seranam-piaramanidina rehetra dia nataon'ny Aviation Seychelles Company, orinasa iray niforona tamin'ny 1973.
Ny asa fanamboarana ho fanitarana be ny seranam-piaramanidina dia nanomboka ny volana jolay 1980. Noho ny fitomboan'ny fitohanan'ny mpandeha hatrany dia namboarina ny tranobe iray izay afaka mamatsy 400 tonga bebe kokoa sy mpandeha 400 miala amin'ny fotoana rehetra. Toeram-piantsonan'ireo fiaramanidina lehibe hatramin'ny enina no namboarina ary toeram-piantsonan'ireo fiaramanidina maivana dimy.
Tamin'ny 1981, dia nisy ady basy tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Seychelles, satria ny teratany anglisy Mike Hoare dia nitarika ekipa mpikarama an'ady afrikanina tatsimo miisa 43 nisandoka ho mpilalao rugby nanao fialan-tsasatra tamin'ny raharaha Seychelles. Taorian'ny fahitana ny fitaovam-piadian'izy ireo miafina rehefa tonga tany dia nisy ny fifanenjehana, ary ny ankamaroan'ny mpikarama an'ady dia nitsoaka tamina fiaramanidina Air India voaroba.
Fampandrosoana hatramin'ny taona 2000
Ny taona 2005/2006 dia nitondra fampandrosoana bebe kokoa ny fiaramanidina sivily tany Seychelles. Ny lalàna momba ny fiaramanidina sivily dia napetraka tamin'ny 4 aprily 2006 ho an'ny fananganana orinasan'ny Direction of Aviation Civile mankany Seychelles Civil Aviation Authority. Nanomboka nanavao sy nanitatra ny tranoben'ny terminal ny asa, izay nitarina bebe kokoa mba hikarakarana farafahakeliny dimy ho an'ny fiaramanidina jet lehibe (oh: Boeing 767 na Airbus A330) ary koa fiaramanidina jet kely kely (ohatra ny Boeing 737 na Airbus A320).
Ny faritra fijanonana fanampiny dia natokana ho an'ny avaratra atsinanan'ny seranam-piaramanidina hitantanana ny fijanonan'ny charte, ny raharaham-barotra ary ny fiaramanidina maharitra (ohatra ny sidina eoropeanina sasany izay tonga tamin'ny maraina nanomboka tamin'ny 7 maraina fa aza miainga raha tsy amin'ny 10 ora alina). Izany dia mampihena ny jet-lag satria ny sidina rehetra miala an'i Seychelles amin'ny alina dia hihazo ny ankamaroan'ny tanàna eropeana Andrefana amin'ny vao maraina ary ny mifamadika amin'izany dia avy amin'ireo tanàna eropeana ka hatrany Seychelles; manome fitsaharana ampy ho an'ireo ekipa miasa ihany koa izy io.
Ny seranam-piaramanidina dia fonenan'ny fiara tsy an'habakabaka tsy an'asa izay ampiasain'ny tafika amerikana ary mety ny masoivohon'ny foibem-pitsikilovana momba an'i Somalia sy ny Horn of Africa. Toa faly ny filohan'ny Seychelles James Michel ny fisian'ny drôna amerikana any Seychelles hiadiana amin'ny piraty sy fampihorohoroana somaliana, nanomboka ny volana aogositra 2009. Farafahakeliny UQ Reaper MQ-9 roa no nianjera tao amin'ny Ranomasimbe Indianina akaikin'ny seranam-piaramanidina nanomboka ny Desambra 2011.